Ungayitshintsha njani i-HHD nge-SSD kwilaptop ngokulula | Iindaba zeGajethi
Iinkumbulo ze-SSD ziqhelekile kwikhompyuter yanamhlanje, Ngapha koko, azikho izixhobo ezimbalwa esele zinolu hlobo lwenkumbulo ukusukela mzuzu sizithenga. Izinto zibonakala zitshintsha xa sinelaptop okanye i-desktop PC ene- HDD Kwaye kuya kufuna ukuba siye ezantsi endaweni yeshishini lokutshintsha i-hard drive yethu endala kunye ne-SSD.
NjengakwiGadget yeActualidad sihlala sifuna ukukunceda, ngeli xesha Siza kukufundisa indlela yokutshintsha i-HHD nge-SSD ngokulula kwiLaptop, eneengcebiso ezisisiseko ukuze uzenzele ngokwakho. Olu luhlobo lwe Phucula ilula kakhulu oqhele ukukhetha ukuyenza ngezandla zakho kwaye uzigcinele imali kwigcisa.
Njengesiqhelo, kufuneka sikukhumbuze ukuba ayingomsebenzi lo womsebenzisi ongaqhelekanga wolu hlobo lwendlela, Oko kukuthi, Ukuba awuzithembi ngokwaneleyo ukuba ungaqhubeka nokutshintsha i-HDD yakho nge-SSD, kungcono ukuba ubeke isixhobo sakho ezandleni zengcaliNgaphandle koko, ungonakalisa ngokusisigxina into ethile yehardware, eya kuba sisiphumo esibulalayo.
1 Ukuqwalaselwa kwangaphambili ngaphambi kokutshintsha i-HDD yakho nge-SSD
2 Ukudibanisa ilaptop
3 Ukufumana kunye nokuCima izixhobo i-HHD
4 Ukufaka i-SSD entsha
5 Ukuqalisa i-PC nge-SSD kunye nokujonga imeko yayo
Ukuqwalaselwa kwangaphambili ngaphambi kokutshintsha i-HDD yakho nge-SSD
Sicinga ukuba sele uskene imarike kwaye uyifumene i-SSD ehlangabezana neemfuno zakho kwaye ulungelelanisa namandla akho ezoqoqosho. Kule meko, siza kuthabatha indawo yedrive ekhatywayo yelaptop, ke ngoko, sijamelene nomsebenzi onzima ngakumbi kune-PC yedesktop. Oku kungenxa yokuba izinto zehardware zihambelana ngakumbi kwinkqubo kwaye nakuphi na ukungalunganga okungalunganga kuya kubulala ukusebenza kwesiqhelo kwencwadana.
Sebenzisa umphezulu ococekileyo nongenabungozi, itafile yedesika yakho kwilaphu entle ihlala ilungile.
Khanyisa ngokuchanekileyo indawo yomsebenzi, iinxalenye ezincinci kunye neooks zinokujikela kuwe
Yenza umzobo weLaptop yakho ephepheni, emva koko iyakukunceda wazi apho kufuneka ubeke khona isiqwenga ngasinye osisusayo
Sebenzisa iteyiphu ukubeka izikhonkwane ezincinci ozisusayo ukubathintela ukuba bangawi kwaye bangabikho
Gcina nayiphi na into engamanzi okanye inkunkuma kwilaptop
Zixhobise ngomonde, ezi ntlobo zezinto zenziwe ngokukhawuleza zihlala zingahambi kakuhle
Ngoku yonke into sele ilungile, lixesha lokuba silungiselele i-SSD yethu kufutshane neelaptop apho siza kwenza khona umsebenzi, kuba oku kufuneka sisebenzise uthotho lwe-screwdrivers ezincinci, zezona zilungileyo. Ke ngoko, ngaphambili siza kukhetha kwaye sifumane izikrini zokuqhuba, siya kusebenzisa inkwenkwezi kunye neflethi, eyokuqala yezikrufu kunye neyesibini ukusinceda silungelelanise ezinye iindawo.
Ngokubanzi, zonke iincwadi zokubhalela zivumela ukutshintshwa ngokulula kwezinto zazo ukuba silahla ikepusi engezantsi, isiseko seencwadana. Ke, masivule ilaptop yethu, siqiniseke kuqala ukuba sikhuphe ibhetri (ukuba iyasuswa) kwaye kunjalo Asinadibaniso lwangoku. Ngale nto siza kukhulula isikere ngasinye. Kubalulekile ukuba uqiniseke ukuba akukho zikhonkwane phantsi kweerubber ezixhasa i-PC, ezinye iimveliso zihlala zibandakanya apho.
Nje ukuba sigcine kwaye sihlele izikrufu, masiqhubeke siphakamise isiciko kancinci. Ukulungiselela le nto, eyona nto ilungileyo kukusinceda ngomhlakulo weplastikhi omncinci, ke siyakuphepha ukwenzakalisa izinto ezenziwe yikhompyuter yethu. Sicinezela kancinci kwicala elidibeneyo, ngaphandle kokusebenzisa amandla amaninzi, kwaye siyigqithisa iblade ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye de sibone ukuba isiseko asifakwanga. Xa sele ikhutshiwe ngokupheleleyo, siyigcina ikhuselekile.
Lixesha lokuba nqamula ibhetri ukuba ilaptop yethu ayisivumeli ukuba siyisuse ngaphandle, oku kuya kusithintela ekubeni nesekethe emfutshane engalindelekanga kunye nokutshisa ibhodi yomama okanye naliphi na icandelo, elingenakulungiswa.
Ukufumana kunye nokuCima izixhobo i-HHD
I-hard drive yoomatshini Ihlala iyinto enkulu kunye neyona nto ibalaseleyo kwilaptop yethu kunye nomdlali weCD (ukuba inayo), ke siya kuyifumana ngokulula. Ubume bayo buxande kwaye ngokubanzi ubandakanyiwe kwisinyithi esenziwe ngabavelisi ukukhusela i-HHD ekuhambeni kakhulu ngaphakathi kwilaptop. Nje ukuba ibekwe, siza kuyikhangela kancinci ukubona ukuba zingaphi izikrufu ezibambelela kwihard drive kwi-chassis yelaptop kwaye Siza kuqhubeka nokuzikhulula Lumka, i-HHD yinto yothusayo.
Nje ukuba siyikhuphe, siza kujonga ithebhu yeplastiki edla ngokusetyenziswa ngabavelisi. Ukutsala kancinci Siza kubona indlela i-HHD enqamla ngayo izibuko layo kwaye singayisusa kwiLaptop. Ungakhathazeki ukuba i-HHD yakho ayinayo le thebhu, ukuyishukumisa kancinci kuya kuyisusa ngokulula.
Ukufaka i-SSD entsha
Ngoku ngoku sifumana i-SSD yethu kwaye siyifaka kwizibuko elinye. Siyakhumbula ukuba ezi ntlobo zamazibuko zahlukile (kwaye zinkulu kakhulu) kunezo ziyimfuneko kwi-SSD. Ke ngoko sinezinto ezimbini onokukhetha kuzo:
Fumana i-SSD esele ibandakanya ibhokisi esivumela ukuba sithathe indawo ye-HHD nge-SSD ngaphandle kweadaptha
Thenga zombini iziqwenga ngokwahlukeneyo
Sincoma ukuba sihlale sithenga ii-SSD esele zilungiselelwe ukuyibuyisela endaweni, zinebhokisi yeplastiki ekhusela i-chip chip kunye nemingxunya yayo yezikrufu ukuyilungelelanisa neebhokisi zentsimbi ezinazo iilaptops zethu. Ngoku kufuneka sikhuphule i-HHD kwibhokisi yesinyithi, sijije i-SSD kwaye siqhubeke ukuyidibanisa kwizibuko elifanayo le-SATA ngoku simahla. Uya kubona okokuqala ukuba i-SSD inobunzima obuncinci, ngenxa yoko awuzuzanga kuphela kwisantya kwiLaptop yakho, kodwa uzuze kancinci ekuphatheni.
Ukuqalisa i-PC nge-SSD kunye nokujonga imeko yayo
Ngoku kufuneka siqale iPC. Ukuba ngaphambili asikhange senze i-HHD yethu isebenzisa isixhobo, singasoloko siyisebenzisa le nto ISIFUNDO ukufaka Windows 10 ukusuka kwiPen Drive okanye naluphi na uhlobo lokugcina esinalo. Nje ukuba iPC yethu isebenze ngokwesiqhelo, siya kusebenzisa isixhobo sohlalutyo sediski, njenge Ulwazi lwediski yeCrystal, Ukuqinisekisa ukuba yonke into ilungile nge-SSD yethu entsha, kwaye uyonwabele.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » Ungayitshintsha njani ngokulula i-HHD ye-SSD kwilaptop